Pop Pin New July 1, 2019
မနေ့ညက MRTV4ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Myanmar’s Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေကိုသာမက တီဗီကြည့်နေတဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေကိုပါ ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်စရာ အကောင်းဆုံး ပြကွက်တွေကို ပြသရင်း Golden Buzzer ရရှိခဲ့သူက “တောက်တောက်ကျော်” ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်သားခုတ်ဓါးမ၊ ငါးခုတ်ဓါမ၊ ပုဆိန် နဲ့ ဓါးတိုတွေကို လေမှာပစ်ဝဲ မြှောက်ကစားရင်း …
” နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့သာ နာကြပါ​တော့ခမျာ ” “ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်အုပ်ထားရမယ့်နိုင်ငံ” နည်းနည်းတော့ကြမ်းချင်ကြမ်းလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ရေးရမှာပဲ ၃တန်းအရွယ် ၄တန်းအရွယ်၁၀နှစ်ပတ်ချာလည်ယောက်ျားလေးတွေဟာSex movies ကြည့်တတ်နေပြီဆိုရင်သင်ယုံပါ့မလား…. အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာအိမ်ကအကိုတွေ ဦးလေးတွေရဲ့ညစ်ညမ်း စာအုပ်တွေကိုကျောင်းကိုယူလာပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖတ်နေကြပြီဆိုသင်ယုံမလား…. ဒါတင်မကသေးဘူး… အိမ်ကလူကြီးတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားလူကြီးတွေရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတွေကိုအမှတ်တမဲ့မြင်ဖူးတယ် တွေ့ဖူးတယ်ကျောင်းမှာအချင်းချင်းထိုကိစ္စတွေကိုပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုတာသင်ယုံပါ့မလား…. အဲဒီအရွယ်လေးတွေမှာသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ အသက်အရွယ်ပိုကြီးတဲ့ယောက်ျား/မိန်းမတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်သလိုရွယ်တူအချင်းချင်းလည်း လက်တည့်စမ်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတာသင်လက်ခံပါသလား…. မယုံမရှိပါနဲ့…ဒါတွေဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေပါ.. ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အမူအကျင့်တွေ …အိမ်မှာမဟုတ်တဲ့ …
နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင် အသက် ၃ နှစ်မပြည့်သေးသည့် ကလေးငယ် မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်ခံရသည့် အမှုသည် အများသူငါ ဝိုင်းဝန်းဝေဖန် ပြောဆိုနေသကဲ့သို့ ရိုးရှင်းမှု မရှိဟု နေပြည်တော်မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ( CID) မှ အဆင့်မြင့်ရဲအရာရှိတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။အမည်မဖော်လိုသူ ရဲအရှိက “အဲဒီရဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုလုံးမှာ ပျော့ကွက်၊ ဟာကွက်တွေ အများကြီး။ …
သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ နေပြည်တော် Wisdom Hill မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းအတွက် ကျူးလွန်သူတရားခံပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ပြည်သူများနှင့် အနုပညာရှင်များ အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူတွေအတွက် ဒီနေ့ဟာတော့ အပျော်ရွှင်ရဆုံးနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ မိသားစု၎ ဦးနဲ့အတူ ဆရာမ N ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီလို့ ခိုင်မာတဲ့သတင်းငှာနက သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို ရေးသားခဲ့သူကတော့ Victoria အတွက်ရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မပိုးဖြူဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ထံမှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Victory …
သက်ငယ်မုဒိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လျော့ရဲနေတဲ့တရားဥပဒေကို ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်က ပြောပြီ
မီးသတ်ဌာနနားခဏတာယာဉ်ရပ်နားရာမှ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ အခြေအတင်ပြဿနာဖြစ်မှုကို အွန်လိုင်းပေါ် Live လွှင့်ပြောဆိုခဲ့ရာမှ လူသိများတဲ့ဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်လာသူ ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်ကတော့ အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပြီး မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားရဖို့အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ Live လွှင့်ရင်း ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလေ့ရှိတာကြောင့် တော်တော်များများရဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကို အတိုင်းအဆမရှိခံခဲ့ရသလို သူမဘက်ကနေရပ်တည်အားပေးသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပညာတတ်ဆန်တဲ့ သူမရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံကို သိမြင်နားလည်လာတာကြောင့် ယခုနောက်ပိုင်း ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်ဘက်ကနေ ရပ်တည်သူတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ မမမြလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်ကတော့ အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားပီပီ …
နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ့် မုဒိမ်းမှု့မှာ လက်တလော အများပြည်သူ သံသယရှိနေတာကတော့ ၎င်း ကျောင်းအုပ်ပိုင်ရှင် ကိုပညာ ၏ သားများဟု ထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပြီး… ယင်းအမှု့မှန် မပေါ်လွင်အောင် နောက်ကွယ်က အဓိက ကြိုးကိုင်နေသူမှာ ယင်းကျောင်းအုပ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသော ကိုပညာ၏ အမဖြစ်သူ #ဒေါ်သီရိမေဆိုသူဖြစ်ကြောင်း မုဒိမ်းမှု့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CCTV သက်သေများကိုဖျောက်ပစ်အစားထိုးခဲ့ကြကြောင်း ၊ ယင်းအမှု့ကို အဓိက …
DNA မတွေ့ဘူးဆိုပြီး ဘာလို့ ကြိုသိနေတာလဲ ဒါဂျာနယ်တစောင်ကို တရားဝင်ပြောထားတဲ့ စကားနော်ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ
ချစ်သုဝေကတော့ အနပညာအလုပ်တွေကိုလဲ အဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်နေသလို ကြော်ငြာတွေကိုလဲ ရိုက်ကူးနေရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အနပညာအလုပ်တွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်စုံတွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ကြားရတာနဲ့ကို စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ ရော အနပညာရှင်တွေကြားမှာပါအတော်လေးကို လူပြောများနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ သမီးလေးဗစ်တိုးရီယားအတွက် …
ကစားကွင်းတစ်ခုတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လည်သည့် အပျော်စီး ရဟတ်တစ်စင်း လူများလိုက်ပါ စီနင်းနေချိန်တွင် ထက်ပိုင်းကျိုးကျခဲ့တာကြောင့် လူစီးတွဲများ မြေပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး သေဆုံးကာ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အူဘက်ကစ်စတန်နိုင်ငံ ဂျစ်ဇက်ခ်မြို့ရှိ ကစားကွင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကို အပျော်တမ်းမှတ်တမ်းတင် ကင်မရာမှ ရိုက်ကူးမိခဲ့သည်။ ရုပ်သံအရ လူစီးတွဲများတစ်ဖက် မောင်းတံ …
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး မိန်းကလေး ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်တော်၊တစ်ယောက်ဖြစ်သလို Beauty By Naychi ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တယောက်လည်း ဖြစ်လာတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ သူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစော်ကားခံခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “နေခြည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နေခြည် ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်အရွယ်က Sexual Harassment …
လက်ရှိ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူလူထုသာမက အနုပညာရှင်များကပါ တက်ညီလက်ညီ မုဒိမ်းမှု့ ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမိဖို့ အရေး ဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကလည်း ပိုပိုများလာပြီး သမီးမိန်းကလေး မွေးထားတဲ့ မိဘများအနေဖြင့် ကိုယ့်သားသမီးလုံခြုံမှု့မရှိဟု ခံစားလာရမှာ အသေအချာပါပဲ။မိုမိုလေးပရိသတ်အတွက် သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က Myanmar Got Talent မှာပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ video လေးတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ …